Maxaa laga bartay Shantii sano ee tagtay,maxaa se laga filan karaa Aqalka sare afartan sano ee soo socota? | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Maxaa laga bartay Shantii sano ee tagtay,maxaa se laga filan karaa Aqalka sare afartan sano ee soo socota?
SONNA (MUQDISHO)- Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo markii labaad noqday guddoomiyaha aqalka sare ayaa markii ugu horeysay wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta Qaranka dib u doorashadiisii kadib, ayaa sheegay in nidaamka Aqalka sare uu Soomaaliya ku cusbaa shantii sano ee la soo dhaafay maaddaama uu qayb ka ahaa nidaamka Faderaalka ee dalka uu qaatay kadib Dowladdii Ku-meel-gaarka.
Afartii sano ee muddo xileedkii hore ee Aqalka sare ayuu sheegay in ay wax ka barteen, waayo aragnimo badana ay ka faa’iideen. Waxa uu rajeeyay in afartan sano ee soo socota ay ka duwanaan doonto afartii hore, “Gollahii hore ma jirin meel uu wax ka tix raaco laakiin hada wax walba waa ay qoran yihiin, xataa xeer hoosaadkii ayuu leeyahay. Hawlaha Dastuuriga ee uu u xil saaran yahay sidii uu u qaban lahaa waa uu yaqaanaa. Wax badan oo mugdi ku jiray hadda waa ay cad yihiin. Kolka maanta waxa aan rajaynayaa in aad iyo aad ay uga duwanaan doonto afartii hore”.
Mar wax laga weydiiyay wada shaqeynta labada aqal ee Baarlamaanka ayaa Guddoomiye Cabdi Xaashi waxa uu sheegay in muddo xileedkii tagay uusan wanaagsanayn wada shaqeynta labada aqal balse waayo aragnimo ay ka heleen arintaa, haddana muhiimaddooda koowaad ay tahay in ay ka shaqeeyaan sidii labada golle ay u wada shaqeyn lahaayeen. Sidoo kale waxa uu sheegay Senetarka in ay diyaarsan yihiin sharciyadii ay ku wada shaqeyn lahaayeen, Guddoomiyaha cusub ee Aqalka Hoose na uu diyaar u yahay wada shaqeynta labada Golle.
Mar uu fariin u dirayay Musharixiinta Madaxtinimada Soomaaliya ee loo asteeyay doorashadooda in ay dhacdo 15ka bishan May ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi “Waxaan filayaa in Musharax walba waxa uu u socdaa ay noqoto dan guud oo aanay noqon dano gaar ah, dalka iyo dadka horumarkoodana Maskaxda lagu heysto”.
Dhanka kale, Xildhibaanada wax dooranaya ayuu kula dardaarmay in ay noqdaan kuwa Maslaxada dalka eegaya, ayna doortaan qofka ay is leeyihiin waxa uu wax ka qaban karaa danta guud ee dalka.
Shantii sano ee la soo dhaafay ayuu Guddoomiye Cabdi Xaashi sheegay in ay jirtay tix galin la’aanta Sharciga, “Dal wuxuu ku hor maraa Sharciga oo loo hogaansamo” ayuu yiri.
Senetor Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa noqonaya Guddoomiyihii Koowaad iyo labaad ee Aqalka sare, tan iyo markii gollahaasi la aasaasay.
Previous articleHabraaca iyo Shuruudaha laga rabo Murashaxiinta xilka Madaxwaynaha JFS
Next articleHowlgal qorsheysan oo lagu dilay horjooge sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab